Koowheel isikuta kagesi ukwenyusa ukuqaphelisa kwemvelo-Ukuvikelwa - Jomo Technology Co., Ltd
Amandla-ukusiza Kid Scooter
Self sekulinganisa isikuta
Koowheel isikuta kagesi ukwenyusa ukuqaphelisa kwemvelo-Ukuvikelwa
Ziningi abadumile hoverboard isikuta brand , is Koowheel Isibhekwa kanjani njengoba phezulu eziyishumi smart isikuta brand iminyaka eminingi? Sicela uvule isiphequluli se-Google, bese ukucinga angukhiye " ukulinganisela isikuta umphakeli ", wathola ukuthi igama www.koowheel.com lesizinda ekhasini lokuqala.
Ngo Century amabili nanye, kungashiwo ukuthi njalo kuphela ushintsho, futhi kule nkathi oguqukayo, ukusinda kwendaba ezinamandla is okufakwe nsuku zonke. Kwezentengiselwano, ngemuva hhayi kuphela kusho washaywa, kusho ukufa, kuphela emisha okuqhubekayo ukuze enze ibhizinisi elinamandla kakhulu nangamandla uyohlala isikhathi eside. Umkhakha zemoto kagesi China ubonakale iminyaka engaphezu kwamashumi amabili yentuthuko, mncintiswano ongene isigaba elimhlophe elishisayo.
Koowheel njengoba professional yokuqala smart isikuta brand , bezilokhu eyaziwa amasu amasha abanolaka, lo muntu ophethe wathi ukuthi ibhizinisi akuyona ezintsha, akukho ukuthuthukiswa. Futhi emisha awukwazi nje uhlale ku ezingeni lobuchwepheshe, kodwa futhi kumele iboniswe e imodeli yebhizinisi, kodwa futhi ukugxila umthengi isipiliyoni somthengi.
Njengoba wonke umuntu uyazi, Kodak ifilimu, iselula NOKIA, Babeyimbangela umbuso ibhizinisi, kodwa manje kuyehla kube ezikweletini, iphuzu nobuso delisting. Isizathu ngenxa yokwehluleka kwakhe silula, akukho ubungqabavu emisha ibhizinisi zezitsha. Inkathi Digital ifikile, smart touch screen umakhalekhukhwini ufikile, basaqhubeka nodumo esidlule, abakwazi ukuzivumelanisa inkathi entsha, ukuze ahlinzeke umthengi kangcono.
Bebhekene nezidingo kwenkathi entsha, kagesi ibhalansi isikuta izinkampani hhayi kuphela ukudala i esebenza kahle ukwelashwa amanzi umphumela, kodwa futhi banake izakhi yemfashini, ngokuhlanganiswa umuntu ophilayo imvelo, ukwakha impilo engcono. Njengamanje, Koowheel kagesi ibhalansi isikuta leading brands are aware of this, obviously in the direction of continuous efforts.
Ngaphezu kwalokho, izinkampani eziningi bayasazi umthengi babesazi imikhiqizo ekhona awukwazi ukuhlangabezana nezidingo emisha. Lokhu emisha kubalulekile, kodwa aphansi umbundu, ehlukile kuqhathaniswa enamandla, kungaletha izinzuzo kanye nokusimama elinganiselwe. Ngakho-ke, umshini ohambisa isikuta amabhizinisi kufanele baphathe emisha ngokuvumelana nesidingo bezikhali abathengi, ezifana imikhiqizo ezintsha aphume Irreplaceable, kulula kakhulu ukuba babe darling entsha emakethe.
Inkathi inquma funa umthengi, funa umthengi kunquma ikusasa lomkhiqizo. Enkathini yangaphambi kwezincwadi umqondo kagesi ibhalansi isikuta, Koowheel ibhalansi kagesi isikuta ukuba "ongaphakeme carbon nokuvikelwa kwemvelo, travel green" izici kungene inzuzo ngokuphelele umkhiqizo, bezikhali angenamkhawulo.
Siyabonga ISIKHATHI SAKHO
Block 1 No.1 ChiTian East Road, BaiShigang Village, ChangPing Town, Dongguan City 523570, China (40000 ㎡)